२ Aw अद्भुत सामाजिक मीडिया उपकरणहरू | Martech Zone
यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू तिनीहरूको लक्ष्य र सुविधाहरूमा बिभिन्न भिन्न छन्। यो इन्फोग्राफिक बाट २०१ Social सामाजिक मिडिया रणनीति शिखर सम्मेलन कोटिहरू राम्ररी तोड्छ।
जब कम्पनीको सामाजिक रणनीतिको योजना बनाउँदैछ, सामाजिक मिडिया व्यवस्थापनको लागि उपलब्ध उपकरणहरूको सरासर संख्या भारी हुन सक्छ। हामीले २ and ठूला उपकरणहरू कम्पाइल गरेका छौं जुन तपाईं र तपाईंको टीम सुरु गर्नका लागि 25 प्रकारका उपकरणमा वर्गीकृत गरिएको छ: सामाजिक सुन्ने, सामाजिक कुराकानी, सामाजिक विपणन, सामाजिक विश्लेषक र सामाजिक प्रभावकारी।
हाम्रो प्रायोजकलाई हेर्नको लागि यो राम्रो छ, मेल्टवटर बज, सामाजिक सुन्न प्लेटफार्महरूको सूची टपिंग गर्दै - हामी उपकरणबाट आश्चर्यजनक परिणामहरू पाइरहेका छौं!
टैग: एगोरा पल्ससल्लाहargylesocialब्रान्डवाचसाथी मिडियाभीडबासविज्ञानहरु संलग्नग्रुफिफhootsuitekloutक्रेडपग्लिनुमेल्टवटर बजpeekanalyticsपोष्टिशर्टस्याकचिल्लाकेवल मापनसामाजिक एनालिटिक्ससामाजिक कुराकानीसामाजिक प्रभावकारीसामाजिक श्रवणसामाजिक बजारसामाजिक उल्लेखसामाजिक काम गर्नेहरुस्रोतमैट्रिक्सछिटो छिटोस्प्रिंकलरस्प्राउट्सोसियलट्रेन्डरभाइरलहीट
नमस्ते डगलस, तपाईंको सूचीको लागि धेरै धन्यबाद, यो सोशल मिडियाको फराकिलो क्षेत्रहरूमा अभिमुखीकरण गर्न वास्तवमै सहयोगी छ 😉 तर म सूचीमा चुपचाप छुन्छु। यो पूर्व allfacebookstats हो। आज यो सब भन्दा व्यावसायिक उपकरण हो। यसको बारेमा के महान छ? तपाईंसँग फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब र गुगल प्लस विश्लेषण गर्न १०० भन्दा बढी मेट्रिक्स छ। र तपाईं आफ्नो विश्लेषणलाई वैयक्तिकृत गर्न सक्षम हुनुहुन्छ ताकि यो तपाईंको आवश्यकताहरूसँग मिल्दछ। यसले तपाईको कुन मार्केटि strate रणनीति सबैभन्दा प्रभावकारी छ भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। तपाईंले यसलाई प्रयास गर्नुहोस्।
नोभेम्बर २०, २००। 4::2013 अपराह्न
पोष्टलि including समावेश गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद, जुन लोकलभक्स प्लेटफर्मको पनि एक हिस्सा हो। हामी तपाईंको टीममा सामाजिक मिडियाको स्थानीय अंशमा केन्द्रित भएको र त्यसमा रहेको अनौठो चुनौतीहरूको रूपमा तपाईंको सूचीमा हुन पाएकोमा हामी सम्मानित छौं। हामीले यसलाई हाम्रो ब्लगमा पोष्ट गर्नुभयो र धन्यवाद!
यो स्रोत साझा गर्न को लागी धन्यवाद .. तपाईले साझा गर्नु भएको महान उपकरण ..
नोभेम्बर,, २०१ at 8::2013 बिहान
तपाईंले साझा गर्नुभएको सामाजिक मिडिया उपकरणहरूको बारेमा राम्रो पोष्टको लागि धन्यवाद। आजको युगमा फेसबुक, ट्विटर र गुगल प्लस विश्लेषण गर्न धेरै उपकरणहरू छन् र तपाईं आफ्नो विश्लेषण निजीकृत गर्न सक्षम हुनुहुन्छ जुन यो तपाईंको आवश्यकताहरूमा फिट हुन्छ। यसले सकारात्मक रूपमा तपाइँको कुन मार्केटि strate रणनीतिहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
नोभेम्बर,, २०१ at 9::2013 बिहान
उत्तम मद्दतको सराहना गरिन्छ 🙂
अगस्ट 16, 2016 मा 8: 30 AM
मेरो व्यक्तिगत मनपर्ने Blog2Social हो। म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्दछ कि Blog2Social एक उत्तम सामाजिक मिडिया क्रस-पोस्टिंग प्लगइन हो किनकि त्यहाँ कुनै सर्भर साइड स्थापना प्रक्रिया हुनु हुँदैन। यसले पोष्ट लेखकलाई Blog2Social वर्ड-प्रेसको पोष्टिdड्यासबोर्डमा सीधै अग्रिम गर्न अनुमति दिँदछ, जुन पूर्व भरी पोष्टिंग पाठ प्रदान गरिएको छ। पाठहरूलाई अनुकूलन गरेपछि लेखकले पोष्टहरूको तालिका बनाउँछ वा ढिलाइ नगरी तिनीहरू प्रकाशन गर्दछ।